गोदावरी नगरपालिकाको तेस्रो स्थापना दिवस सम्पन्न
फाल्गुण २७, २०७५ | ललितपुर
गोदावरी नगरपालिकाले आज भव्यताका साथ तेस्रो स्थापना दिवस मनाएको छ । सो अवसरमा पारेर नगरपालिकाले तयार पारेको नगर गीत फुल्चोकीको शीर, बाग्मतीको तीर भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले गोदावरी क्षेत्र पर्यटकीय रुपले अत्यन्तै सुन्दर रहेको समेत बताउनुभयो ।
विकास निर्माणका काम क्रमशः हुदै जाने भएकोले त्यसलाई क्रमिक रुपमा सवैले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘बजेटको हिसावले कुनै कमी आउने छैन तर विकास निर्माणका कामलाई तीव्र रुपले अगाडी बढाउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
विस २०७४ सालमा सम्पन्न भएको तीनै तहको निर्वाचनले तीनै तहको सरकार निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय निकायको सही कामलाई प्रदेश वा केन्द्रले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न उचित नभएको उहाँले तर्क गर्नुभयो । यसै गरी प्रदेशले लिएको सकारात्मक कामलाई समेत केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सातदोवाटो–चापागाउँ–गोदावरी खण्डको सडक मापदण्ड अनुरुप नै निर्माण गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विकास निर्माणका काममा बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो । बाटो निर्माण भविष्यलाई हेरेर मात्र निर्माण गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनले नगरपालिकाको तेस्रो स्थापना दिवससम्म आइपुग्दा नगरपालिकाले विकासका कामहरुलाई तीव्र रुपले अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । प्राकृतिक रुपमा सुन्दर रहेको गोदावरीलाई धार्मिक–पर्यटकीय रुपमा विकास गरिँदै लैजाने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जनतिनिधि भएर नगरपालिकामा आइसकेपछि यस क्षेत्रको विकास तीव्र रुपमा भइरहेको उहाँको भनाई थियो । यस क्षेत्रमा रहेको खानोपानीको समस्याको समाधान क्रमिक रुपमा भईरहेको नगरप्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । खानेपानी समस्या समाधानका लागि हालसम्म तीनवटा डिप बोरिङ सम्पन्न भइसकेको तथा अर्को एउटा शुरु भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी गोदावरी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउने गरी गोदावरी बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको निर्माण भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । काठमाडौं उपत्यकालाई नियाल्न सकिने गरी देवीचौरमा भ्युटावरको निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विकास निर्माणको काममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाले जोड दिनुभयो ।
यसै गरी नगरउपप्रमख मुना अधिकारीले समृद्ध नगरपालिका निर्माण कार्यमा सवैको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । यस क्षेत्रलाई साँच्चै नै नमूना नगरपालिका बनाउने लक्ष्यमा सिङ्गो नगरपालिका जुटेका छौं –उहाँले भन्नुभयो ।
स्थापना दिवसको अवसर पारेर नगरपालिकाका उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई नगद सहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित हुने कर्मचारीहरुमा इञ्जिनियर सुनिल श्रेष्ठ, नायव सुव्वा जयराम सिलवाल, सहायक कम्प्युटर अपरेटर कमला थापा, सामाजिक परिचालक इन्द्र तामाङ तथा कार्यालय सहयोगी उतम थापा रहेको थियो । सम्मानित प्रत्येक व्यक्तिले नगद रु. पाँच हजार र प्रमाणपत्र पाउनुभएको थियो ।
यसै गरी कक्षा १२ को नतिजा अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल बज्रवाराही माध्यमिक विद्यालयलाई रु. एक लाख सहित नगरपालिकाले सम्मान गरेको छ ।
नगर गीतको रचनाकार बशिष्ठ अधिकारी तथा सो गीतमा संगित दिनुहुने आलोक श्रीलाई कदर–पत्रले सम्मान गरेको थियो । यसै गरी नगर गीतमा स्वर दिनुहुने कलाकार प्रताप दास, धर्मेन्द्र सेवाङ तथा निशा देशारलाई समेत कदर–पत्रवाट सम्मान गरिएको थियो ।
महिला, बालवालिका तथा शैक्षिक क्षेत्रमा दख्खल राख्नुहुने सञ्चारकर्मी दिपक अर्याललाई नगरपालिकाले सम्मान गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य नवराज सिलवाल, प्रदेशसभा सदस्य चेतनाथ सञ्जेल, राजकाजी महर्जनलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।